Avelao izay matanjaka kokoa no hitondra
"(Hoy Jesosy:) Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana."Matio 11:28
"Apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo."1 Petera 5:7
Mihisatra ny fotoana, eto amin’ny efitranon’ny hôpitaly misy ahy; saingy mba misy zavatra mahafaka andro ahy kely ihany, tazako avy eo am-baravarankely, dia ny asa fanorenana trano lehibe iray. Amin’ireo fitaovana rehetra miasa eo, misy iray manintona ahy manokana, dia ilay rafi-by avo, fibatana enta-mavesatra. Isa-maraina dia ny mpandefa azy no tonga voalohany eo amin’ny toeram-piasana; miakatra eny ambonin’ilay rafi-by izy, ary miandry ny baikon’ny ekipany, izay tsy ela dia misomebiseby ery ambany ery. Misy zavatra tena mavesatra, hafindra toerana, saingy tsy misy mpiasa hihevitra ny hanao izany akory: apetaka fotsiny amin’ny tady vy-n’ilay milina ny zavatra tokony hobataina, dia ilazana ilay mpandefa hibata izany. Hadalana tanteraka sy tsy ho vita akory ny hibata zavatra an-jato kilao, kanefa mora foana no anaovan’ilay milina izany!
Dia tonga ao an-tsaiko ny ezaka maro ataontsika, matetika, itondrana zavatra mavesatra loatra ho antsika: fieritreretana tsy milamina, fahabangana ao am-po, fitadiavana fitiavana… Firifiry moa ny vesatra, fanahiana, tebiteby, izay zara raha ho zakantsika kely akory!
Vonona Jesosy ny hisolo toerana antsika, hitondra ny zavatra rehetra manindry antsika. Aoka hivavaka, hametraka aminy ireny vesatra ireny sy hangataka aminy mba hitondra izany.
Ry mpamaky, aoka izay ity fisasarana hitondra samirery izay tian’Andriamanitra hoentina miaraka aminao, na hoentiny irery aza, hisolo toerana anao! Manatòna Azy, miresaha aminy. Tia anao Izy, ary maniry izay hahasoa anao. Ny Tompo Jesosy dia te ho Mpamonjinao, te hanohana anao isanandro, te hanolo-tsaina sy hitari-dalana anao.